Panning for Gold in Mozambique - 17 Sep 2010
A muddied prospector takes a break from panning for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border,...
A muddied prospector takes a break from panning for gold in Manica Province
A muddied prospector takes a break from panning for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY EMPLOYMENT BUSINESS IMAGES OF THE DAY)
A muddied prospector pans for gold in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds...
A muddied prospector pans for gold in Manica Province near the Zimbabwe border
A muddied prospector pans for gold in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
REUTERS/ Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY EMPLOYMENT BUSINESS)
A gold miner prepares to climb down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September...
A gold miner prepares to climb down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border
A gold miner prepares to climb down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners. REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY BUSINESS HEADSHOT)
A gold miner smiles as he climbs down into a mine shaft in Manica Province, near the Zimbabwe border,...
A gold miner smiles as he climbs down into a mine shaft in Manica Province
A gold miner smiles as he climbs down into a mine shaft in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: EMPLOYMENT BUSINESS IMAGES OF THE DAY SOCIETY)
A gold miner prepares to climb down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
A gold miner rests before climbing down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border...
A gold miner rests before climbing down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
A gold miner climbs down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September 18,...
A gold miner climbs down into mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border
A gold miner climbs down into a mine shaft in Manica Province near the Zimbabwe border September 18, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
Muddied prospectors pan for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds...
Muddied prospectors pan for gold in Manica Province
Muddied prospectors pan for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners. REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY EMPLOYMENT BUSINESS)
Muddied prospectors pan for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY EMPLOYMENT BUSINESS)
Gold nuggets are seen in a prospector's basin in Manica Province, near the Zimbabwe border, September...
Gold nuggets are seen in a prospector's basin in Manica Province
Gold nuggets are seen in a prospector's basin in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
A muddied prospector pans for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010....
A muddied prospector pans for gold in Manica Province
A muddied prospector pans for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.
REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY)
A muddied prospector pans for gold in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners. REUTERS/Goran Tomasevic (MOZAMBIQUE - Tags: SOCIETY EMPLOYMENT BUSINESS)
Gold prospectors fight over a payment in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010....
Gold prospectors fight over a payment in Manica Province
Gold prospectors fight over a payment in Manica Province, near the Zimbabwe border, September 17, 2010. Hundreds of miners work in individual claims rented from local landowners.